Ọrụ Canonical na onye nrụnye ọhụrụ maka Ubuntu ma na-ekwukwa Martin Wimpress | Site na Linux
Arụ ọrụ Canonical na onye nrụnye ọhụụ maka Ubuntu ma na-ekwukwa Martin Wimpress
Izu gara aga bụ otu n'ime ọrụ Canonical nọ n'ọrụ, nke ọma, na mgbakwunye na ime ka amara ọhụrụ isi update maka ugbu a LTS mbipute nke Ubuntu (Ubuntu 20.04) kwa Akụkọ mere na onye isi ya na tebụl desktọọpụ arụkwaghịm.
Ma ọ bụ ya Martin Wimpress (onye nchoputa nke Ubuntu MATE mbipụta, nke gụnyere na Core Team MATE project) kwuputara ọkwa na arụkwaghịm dị ka onye ntụzi aka maka usoro desktọọpụ na Canonical.
A na-ejikọ resition na nnabata ọrụ na Slim.AI, nke na-emepe usoro DockerSlim iji belata nkata nke Docker.
Na twitter Ọ bụ ebe Martin Wimpress kwupụtara ezumike nka ya na ọrụ ahụ:
Aga m ahapụ Canonical n'oge na-adịghị anya. Obi dị m ezigbo ụtọ iso ndị ezi mmadụ.
@SlimDevOps N'agbanyeghị mgbanwe ahụ, M ga-anọgide na-eduga @ubuntu_mate
; ọ bụ agụụ mmekọahụ m. Dị ka o kwesịrị ịdị, m ga-anọgide bụrụ onye na-anụ ọkụ n'obi na obodo #Ubuntu na Snapcraft.
Na ozi gị, anyị nwere ike ịhụ nke ahụ mgbe ọ gbanwechara ọrụ, Martin ga-edobe ọnọdụ ya dị ka onye ndu Ubuntu MATE ma ga-aga n'ihu isonye na mmepe Ubuntu na Snapcraft.
Ọzọkwa, Ọ dị mkpa iburu n'uche na Martin Wimpress, tupu ikwusa arụkwaghịm ya dị ka onye nduzi Canonical nke mmepe desktọọpụ, kwuputara mmepe nke onye nhazi ọhụrụ maka Ubuntu, nke ha na-ezube ịnye ndị ọrụ iji nwalee mbupute ọdịda nke Ubuntu Desktop 21.10 ma enwere ike iji ya na ndabara na Ubuntu 22.04 LTS.
Ochie installer nke Ubiquity ga-anọgide na ebe nchekwa ma ga-adị iji mee ihe na mbipụta Ubuntu na nkesa ewepụtara.
Emepụtara onye nrụnye Ubiquity na 2006 ma agbanwebeghị n'afọ adịbeghị anya. Na mbipụta ihe nkesa nke Ubuntu, malite na mbipute 18.04, a na-ewepụta onye nrụnye ọhụrụ, Subiquity, nke bụ nkwụnye n'elu curtin dị ala, nke na-ahụ maka njedebe ikpeazụ nke diski ahụ, nbudata nke nchịkọta ma wụnye usoro dịka nhazi ahụ enyere.
Ọnụnọ nke installers abụọ dị iche na-eme ka mmezi sie ike ma mepụta ọgba aghara n'etiti ndị ọrụ, ya mere e kpebiri iji jikọta mmepe ma kwadebe ihe nrụnye ọhụrụ kama nke ochie Ubiquity, nke e wuru na ntọala nkịtị na Subiquity na iji otu usoro ntinye maka usoro ihe nkesa na desktọọpụ.
Onye nrụnye Desktọpụ Ubuntu ugbu a, Ubiquity, malitere na 2006. Mgbe ọ ka na-arụ ọrụ, Ubiquity emebeghị ihe ngosi dị mkpa maka afọ ole na ole n'ihi ihe nketa ya ọ na-esi ike idobe. Ka ọ dị ugbu a, e mepụtara ihe nrụnye ọhụrụ maka Ubuntu Server, nke a na-akpọ Subiquity 153, nke na-eji curtin 216.
Ijikọta ihe nkesa na desktọọpụ desktọọpụ na teknụzụ ndị nkịtị ga-apụta na anyị nwere ike ịnye ahụmịhe nrụnye na-agbanwe agbanwe ma sie ike n'ofe ezinụlọ Ubuntu ma lekwasị anya na mbọ anyị na ịchekwa otu koodu ntọala.
Mepụta ihe nrụnye ọhụrụ ga-enye gị ohere ịnyefe ahụmịhe kachasị mma nke sistemụ nrụnye dị ugbu a ma mejuputa arụmọrụ na-eburu n'uche ọchịchọ nke ndị ọrụ dị iche iche.
Arụ ọrụ na-arụ ọrụ nke onye nrụnye ọhụrụ dị ugbu a, nke Canonical Design Team na Ubuntu Desktop Team kwadebere.
Ihe ntinye ohuru bụ ngwa mgbakwunye curtin nke na-eji Flutter kpuchie ya maka njirimara onye ọrụ, na-enye gị ohere ịmepụta ngwa ụwa niile na-agba na nyiwe dị iche iche.
Usoro mmepe maka nrụnye desktọọpụ ọhụrụ ahụ bụ ndị otu ndị na-ahụ maka ọdịmma Canonical na ndị otu desktọọpụ Ubuntu na-edozi. Ulo oru abuo a nwere oke aka na nzute nsogbu ndi n’eji etinye sistemu sistemu n’oge a.
Edere koodu nkata installer na Dart (Iji tụnyere, Ubiquity na Subiquity dere na Python). Ezubere onye nhazi ahụ na desktọọpụ Ubuntu nke oge a ma kee ya iji nye usoro ntinye na-agbanwe agbanwe gafee usoro ngwaahịa Ubuntu niile.
N'ikpeazụ, ọ bụrụ na ịchọrọ ịmatakwu banyere onye nhazi ọhụrụ, you nwere ike ịlele nkọwa na esonụ njikọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Arụ ọrụ Canonical na onye nrụnye ọhụụ maka Ubuntu ma na-ekwukwa Martin Wimpress
Rexuiz, Trepidaton na Smokin 'Guns: 3 More Fps Games maka GNU / Linux
Ubuntu 20.04.2 LTS na Kernel 5.4 na-abịa, mmelite nhazi eserese, na ndị ọzọ